Vaovao - Fanoherana fanoherana ny vary
Fanoherana fanoherana ny vary
Ny famahanam-bary dia olana goavana amin'ny fizotry ny fambolena sy ny fitantanana. Satria mora tohin'ny toetr'andro tafahoatra ny vary, toy ny rivotra mahery sy ny rotsakorana amin'ny fotoam-pivoarana any aoriana, raha vantany vao hipetraka izy dia hisy fiantraikany amin'ny famokarana izany. Noho izany, eo am-panaovana fambolena vary, dia tsy maintsy jerentsika ny olan'ny trano fitobiana.
Mba hampihenana ny mety hitoeran'ny vary dia tokony horaisina ny fepetra hifehezana ny habetsaky ny rano amin'ny tanimbary, hanamainana ny saha amin'ny fotoana voafehiny, hifehezana tsara ny hakitroky ny zana-ketsa fa tsy dia lalina loatra, fehezo ny zezika azon'ny zezika, ary aretina mifehy ara-potoana sy bibikely bibikely. Ny fepetra lehibe indrindra hialana amin'ny filaharan'ny vary dia ny mpandamina ny fitomboan'ny zava-maniry. Izay tokony hampiasaina araka ny fitomboan'ny saha, ary ny fatra mety dia tokony hofehezina.
Kalsioma Prohexadione ：Amin'ny lafiny iray, ny kalsioma Prohexadione dia afaka mampihena ny halavan'ny internode, ny haavon'ny fototra dwarf, ary manatsara ny fanoherana; Etsy ankilany, afaka mampihena ny tahan'ny mihena izy io ary mampitombo ny voa. Ny kalsioma Prohexadione dia mamaha ny fifanoherana eo amin'ny fanoherana ny trano fandraisam-bahiny sy ny vokatra avo amin'ny vary. Eo ambanin'ny fiantohana ny haavon'ny zavamaniry iray sy ny hakitroky ny fambolena, dia mampiroborobo ny famenoana voam-bary malemy.
Raha ampitahaina amin'ny vokatra triazole, ny tombony azo avy amin'ny kalsioma Prohexadione:
1. Miasa be ny firafitry ny ravina
2. Tapaky ny androm-piainany, poizina ambany ary tsy misy ambiny
Paclobutrazol: Mampiasà 100 ~ 133 grama an'ny WP Paclobutrazol 15% isaky ny mu, ampio rano 100 kg hanaovana vahaolana paclobutrazol miaraka amina fametahana 150 ~ 200mg / L, esory ny tahony sy ny ravina amin'ny vahaolana alohan'ny fampiraisana, izay afaka hanafohezana ny internodes, matevina ny rindrin'ny fotony ary ampivoary ny fandaminana mekanika, izay afaka misoroka tsara ny trano fandraisam-bahiny.
Chlormequat Chloride: Amin'ny fiandohan'ny fampiarahana dia ampiasao 50% AS Chlormequat Chloride 50 ~ 100g isaky ny acre ary ampio rano 50 kg hanomanana 500 ~ 1000mg / L. Esory ny taho sy ny ravina mba hahalavoan'ny zavamaniry vary ary tsy hitoerana.
Ethephon:Ho an'ny zana-bary amin'ny fararano dia mampiasa 40-50 kg Ethephon miaraka amina 3000 mg / L per mu ho an'ny foliar spray, na mampiasa 50 kg 1500 mg / L aorian'ny fambolena any an-tsaha mandritra ny 20-30 andro. Ny famafazana ranon-tsavony ethephon dia afaka manakana ny fitomboan'ny haavon'ny zavamaniry ary mampitombo ny mpamboly aorian'ny fitsaboana.